ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအသောက်များ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များ by popolay.com
24 Oct 2020 3,102 Views
1. ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက် နေကြာဆီကိုသုံးစွဲပေးဖို့ ကျန်းမာရေးနှင့်သင့်တော်ပါသည်။ ပြည့်ဝဆီ အက်ဆစ်ပါဝင်၍ သွေးကြောထဲအဆီများကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
2. အရိုးနှင့်ကြွက်သားများ သန်မာစေအောင် Calcium နှင့် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း၊ နို့၊ တစ်ကောင်လုံးစားလို့ ရသောအကောင်သေးငါးများ၊ တို့ဟူး၊ ပဲဝါ၊ အစိမ်းရောင်ရှိအရွက်များ စသည်တို့သည် Calcium ဓါတ်များ ရရှိနိုင်၍ အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းတာဝန်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကောင်းမွန်စေပါသည်။
3. ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောဆန်ကြမ်းနှင့် ကောက်ပဲသီးနှံများကို စားသုံးပေးခြင်း၊ ၎င်းသောအုပ်စုများ ထဲတွင် Fibre ဓာတ်များပါဝင်သောကြောင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေရှိခြင်းကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း၊ Cholesterol ပမာဏကို လျှော့ချပေးနိုင်ခြင်း၊ သွေးထဲသကြားဓါတ်ပမာဏကို မျှတမှုရှိအောင် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်း စသဖြင့်ပါ။
4. လက်ဖက်ခြောက်ရည် ( သို့ ) ရေနွေးကြမ်းသောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးညီညွတ်စေနိုင်သည်။ လက်ဖက်စိမ်း၊ လက်ဖက်အနက်၊ လက်ဖက်ခြောက်စသည်တို့သည် Anti Oxidant ပါဝင်နေသော ကြောင့် တစ်နေ့မှာ ၁ - ၃ ခွက်သောက်သုံးပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း အစာအိမ်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ ကို ၃၀% လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
5. သဘာဝမှရသော အစားအစာများကို စုံစိစွာ စားသောက်ပေးသင့်ပါသည်။ အသီးအရွက်များကို အရောင်စုံလင်အောင် စားသုံးပေးသင့်ရခြင်းမှာ - ခရမ်းချဉ်သီးအနီရောင်၊ ခရမ်းရောင်စပျစ်သီး၊ အစိမ်းရောင် Brocooli / carrot လိမ္မော်ရောင် တစ်ခုတည်း၊ တစ်မျိုးတည်းနှင့် စွဲလန်း၍ မစားပေးသင့်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရောင်ခြင်းကွာခြားမှုရှိသော အသီးအနှံများအလိုက် အာဟာရဓါတ် အမျိုးအစားများလည်း ကွာခြားမှုရှိနေပါသည်။
6. ငါးစားပေးခြင်း ငါးကို တစ်ပါတ်မှာတစ်ခါစားပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာမှုကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ Omega3အဆီအက်ဆစ်နှင့် Protein ပါဝင်သောကြောင့် နှလုံးခုန်နှုန်း ပုံမှန်ရှိအောင်ထိန်းချုပ်ပေးခြင်း၊ ဦးနှောက်ဆဲလ်များကို ပျိုုးထောင်ပေးခြင်း၊ အဆီလည်း နည်းနေသောကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းချုပ်သောသူတို့အတွက်လည်း သင့်တော်နေပါသည်။
7. ပဲအမျိုးအစားများသည်လည်း Protein / Vitamin နှင့်သတ္ထုဓာတ်များပါရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း ညီညွတ်သော အစားစာဖြစ်ပါ၍ စားသောက်ပေးဖို့ သင့်တော်ပါသည်။